Injongo KaThixo Iza Kuzaliseka! | Efundwayo
“Ndikuthethile oko; yaye ndiya kukuzisa. Ndikuyilile, yaye ndiya kukwenza.”​—ISA. 46:11.
Yintoni injongo kaYehova ngabantu?
Yeyiphi imvukelo engazange yoyise injongo kaYehova?
Iza kuzaliseka njani injongo kaYehova?
1, 2.(a) Yintoni uYehova aye wasichazela yona? (b) Sesiphi isiqinisekiso esisifumana kuIsaya 46:10, 11 nakwisahluko 55:11?
AMAZWI nje okuqala eBhayibhile athi: “Ekuqaleni uThixo wadala amazulu nomhlaba.” (Gen. 1:1) Kuyinyaniso ukuba incinci gqitha into esiyaziyo ngendalo kaThixo, efana namajukujuku, ukukhanya, nomxhuzulane, ibe sisabone nje isuntswana layo. (INtshu. 3:11) Sekunjalo, uYehova uye wasichazela ngenjongo anayo ngabantu nangomhlaba. Umhlaba wawenzelwe ukuba ube likhaya elihle labantu abadalwe ngokomfanekiso kaThixo. (Gen. 1:26) Babeza kuba ngabantwana bakhe, aze uYehova abe nguYise.
2 Njengoko kuchaziwe kwisahluko sesithathu seGenesis, kukho ingxaki eyazama ukuxaba phambi kwenjongo kaYehova. (Gen. 3:1-7) Kodwa ke, loo ngxaki yayiza koyiswa nakanjani na. Kaloku akukho nto inokuma phambi koYehova. (Isa. 46:10, 11; 55:11) Ngoko, sinokuqiniseka ukuba injongo kaYehova iza kuzaliseka nokuba sekumnyam’ entla ngexesha elifanelekileyo!
3. (a) Zeziphi iimfundiso ezibalulekileyo ezisinceda siqonde oko kuthethwa yiBhayibhile? (b) Kutheni siphinda sifunda ngazo ngoku? (c) Yeyiphi imibuzo eza kuphendulwa?
3 Ngaphandle kwamathandabuzo, siqhelene noko iBhayibhile ikufundisayo ngenjongo kaThixo ngomhlaba nangabantu, nangendima uYesu Kristu anayo ekuphunyezweni kwaloo njongo. Ezi mfundiso zibaluleke kakhulu kwaye zimele ukuba zezinye zeemfundiso esaqala sazazi xa sasifundelwa iLizwi LikaThixo. Nathi, sifuna ukunceda abantu abanomdla bazi ezi mfundiso zibaluleke kangaka. Njengokuba ngoku sixubusha eli nqaku njengebandla, sikwiphulo lokumemela abantu abaninzi kangangoko kwiSikhumbuzo sokufa kukaKristu. (Luka 22:19, 20) Abo baza kubakho baza kufunda okuninzi ngenjongo kaThixo. Kwezi ntsuku ziseleyo ngaphambi kweSikhumbuzo, sifanele sicinge ngemibuzo esinokuyisebenzisa ukuze sincede izifundo zethu zeBhayibhile nabanye abantu babe nomdla wokubakho kwesi sihlandlo sibalulekileyo. Siza kuphendula le mibuzo mithathu: Yeyiphi injongo uThixo awayenayo kwasekuqaleni ngabantu nangomhlaba? Konakala phi? Idini lentlawulelo likaYesu liyivula njani indlela yokuba kuzaliseke injongo kaThixo?
YEYIPHI INJONGO UMDALI AWAYENAYO KWASEKUQALENI?
4. Indalo imzukisa njani uYehova?
4 UYehova nguMdali omangalisayo. Akukho kwanto ifuna ukulungiswa kwindalo yakhe. (Gen. 1:31; Yer. 10:12) Singafunda ntoni kubuhle nakwindlela elungelelaniswe ngayo? Xa sijonga indalo, siye sichukunyiswe yiyo yonke imisebenzi kaYehova, emincinci nemikhulu, kuba yonke yenziwe ngenjongo. Ngubani ongamangaliswayo kukuntsonkotha kweseli yomntu, kukuthandeka kosana, okanye bubuhle belanga xa lisithi ndithenge? Siyazibuka ezi zinto kuba sidalwe sakwazi ukubona into entle.​—Funda iNdumiso 19:1; 104:24.
5. UYehova uqinisekisa njani ukuba yonke indalo isebenza ngocwangco?
5 Njengokuba sibona kwindalo, uYehova uyibekele imida. Wenze imithetho yendalo neyokuziphatha ukuze yonke into ihambe ngocwangco. (INdu. 19:7-9) Yiloo nto zonke izinto zinendawo yazo kwaye zisebenza ngokwendlela uYehova afuna ngayo. NguYehova ogqibayo ukuba indalo ifanele isebenzisane njani. Amandla omxhuzulane enza ukuba iigesi ezijikeleze umhlaba zingaze ziwushiye, alawula amaza neelwandle, ibe enza kubekho ulungelelwano olufunekayo ukuze kuphileke emhlabeni. Yonke indalo, kuquka abantu, iphila ngalo mthetho womxhuzulane. Kucacile ukuba indlela indalo elungelelaniswe ngayo ibonisa ukuba uThixo unenjongo ngomhlaba kunye nabantu. Ngoko ngaba singakwazi ukunceda abantu entsimini bamazi uMdali wolu lungelelwano?​—ISityhi. 4:11.
6, 7. Zeziphi izipho uYehova awazinika uAdam noEva?
6 Injongo kaYehova yasekuqaleni yayikukuba abantu baphile emhlabeni ngonaphakade. (Gen. 1:28; INdu. 37:29) Wanika uAdam noEva intabalala yezipho ukuze baphile kamnandi. (Funda uYakobi 1:17.) UYehova wabapha ilungelo lokuzikhethela, amandla okucinga, ukukwazi ukuthanda abanye abantu nokwakha ubuhlobo. Waye waxelela uAdam indlela awayefanele athobele ngayo. UAdam waye wafunda indlela yokunyamekela yena, izilwanyana kunye nomhlaba. (Gen. 2:15-17, 19, 20) UAdam noEva badalwa bakwazi ukuva, ukungcamla, ukuchukumisa, ukubona, nokuva amavumba. Loo nto yayibenza baphile kamnandi kwikhaya labo elihle eliyiParadesi. Kwesi sibini, umsebenzi owanelisayo nokwazi izinto ezintsha kwakuza kuba yinto yomhla nezolo.
7 Yayiquka ntoni injongo kaThixo? UYehova wadala uAdam noEva ngendlela yokuba bakwazi ukuba nabantwana abafezekileyo. Wayefuna babe nabantwana baze bazalise umhlaba. Wayefuna uAdam noEva kunye nabo bonke abazali babathande abantwana babo kanye njengokuba naye wayebathandile abantwana bakhe bokuqala. Umhlaba nezinto zonke ezikuwo, wawuza kuba likhaya labo ngokusisigxina.​—INdu. 115:16.
8. Wawunayiphi indima umthetho okwiGenesis 2:16, 17?
8 Izinto zange zihambe ngokwenjongo kaThixo. Kwakutheni? UYehova wanika uAdam noEva umyalelo ocacileyo owawuza kubavavanya ukuba babewuqonda na umda wenkululeko yabo. Wathi: “Kuyo yonke imithi yomyezo ungadla wanele. Kodwa wona umthi wokwazi okulungileyo nokubi uze ungadli kuwo, kuba mhla uthe wadla kuwo uya kufa ngokuqinisekileyo.” (Gen. 2:16, 17) Kwakungenzimanga ukuba uAdam noEva bawuqonde baze bawuthobele lo mthetho. Ngapha koko, ukutya kwakudlal’ abantwana.
9, 10. (a) Sesiphi isityholo uSathana awamtyabeka ngaso uYehova? (b) UAdam noEva bakhetha ukwenza ntoni? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
9 USathana uMtyholi wasebenzisa inyoka ukuze aqhathe uEva, efuna ukuba angamthobeli uYise, uYehova. (Funda iGenesis 3:1-5; ISityhi. 12:⁠9) Wayenza into enkulu into yokuba abantwana bakaThixo bengavumelekanga ukutya “kuyo yonke imithi yomyezo.” Kwakungathi uthi: ‘Nitheth’ ukuba anivumelekanga ukuba nenze into eniyifunayo?’ Emva koko waxoka esithi: “Ngokuqinisekileyo anisayi kufa.” Wamcenga uEva ukuba angammameli uThixo, esithi: “UThixo uyazi ukuba mhla nithe nadla kuzo aya kuvuleka amehlo enu.” USathana watyhola uYehova esithi wayengafuni batye eso siqhamo kuba wayesazi ukuba babeza kuvuleka ingqondo. Wongezelela ngokwenza esi sithembiso singekhoyo: ‘Niza kuba njengoThixo, nazi okulungileyo nokubi.’
10 Ngoku icekwa lalilele kuAdam noEva. Ngaba babeza kuthobela uYehova okanye bamamele inyoka? Bakhetha ukungamthobeli uThixo. Ngokwenjenjalo, nabo babevukela njengoSathana. Bamgatya uYehova njengoYise, bezikhupha phantsi kolawulo lwakhe olukhuselayo.​—Gen. 3:6-13.
11. Kutheni uYehova engazange ayinyamezele imvukelo?
11 Ukungathobeli kuka-Adam noEva kwabenza bayeka ukufezeka. Ngaphezu koko, ngenxa yokuvukela kwabo, uYehova wabalahla kuba ‘usulungeke kakhulu emehlweni ukuba angabona okubi.’ Ngenxa yoko, akakwazi ukukhangela ububi. (Hab. 1:13) Ukuba ebebunyamezela, zonke izidalwa eziphilayo​—emazulwini nasemhlabeni—beziya kuba sengxakini. Ngaphezu kwazo zonke ezi zinto, ukuba uThixo wayesonge izandla emva kwesono esenziwa e-Eden, besingayi kumthemba. Kodwa uYehova uthembekile kwimithetho yakhe; akaze ayophule. (INdu. 119:142) Ukuba nenkululeko yokuzikhethela kuka-Adam noEva kwakungathethi kuba babenokwaphula umthetho kaThixo. Umphumo abawufumanayo ngenxa yokungathobeli kwabo uYehova waba kukufa, bebuyela eluthulini ababedalwe ngalo.​—Gen. 3:19.
12. Kwenzeka ntoni kubantwana baka-Adam?
12 Xa uAdam noEva batya eso siqhamo, abazange baphinde bamkeleke kwintsapho enkulu kaThixo. UThixo wabagxotha e-Eden baza ababa nalo nelincinci ithemba lokubuyela apho. (Gen. 3:23, 24) Ngokwenjenjalo, uYehova wayebanika isohlwayo esibafaneleyo ngenxa yesigqibo ababesenzile. (Funda iDuteronomi 32:4, 5.) Ekubeni ngoku abantu babengafezekanga, babengasakwazi ukuba nazo ngokugqibeleleyo iimpawu zikaThixo. UAdam akazange alahlekelwe likamva eliqaqambileyo kuphela, kodwa warhuqa nabantwana bakhe wayokubafaka kukungafezeki, isono nokufa. (Roma 5:12) Wabandeza inzala yakhe ithemba lokuphila ngonaphakade. Ukongezelela koko, uAdam noEva nabantwana babo babengayi kukwazi ukuba nabantwana abafezekileyo. Emva kokukhohlisa uAdam noEva, uSathana uMtyholi nanamhlanje usaqhubeka elahlekisa abantu.​—Yoh. 8:44.
INTLAWULELO INGCIBA IINTANDA
13. UYehova ubanqwenelela ntoni abantu?
13 UThixo akayekanga ukubathanda abantu. Nakubeni wavukelwa nguAdam noEva, uYehova usafuna abantu babe nolwalamano oluhle kunye naye. Akanqweneli ukuba kufe nabani na. (2 Pet. 3:9) Emva kwemvukelo, uThixo wenza indlela yokuba abantu baphinde babe ngabahlobo bakhe ngoxa engagungqi kwimilinganiselo yakhe. Wakwenza njani oku?
14. (a) Ngokutsho kukaYohane 3:16, yintoni uThixo awayenzayo ukuze abantu baphinde babe ngabahlobo bakhe? (b) Ngowuphi umbuzo esinokuncokola ngawo nabo banomdla?
14 Funda uYohane 3:16. Abo sidla ngokubamema eSikhumbuzweni bamele ukuba sele beyazi ngentloko le vesi. Kodwa umbuzo ngulo, Kutheni kusithiwa idini likaYesu linokusenza sifumane ubomi obungunaphakade? Iphulo leSikhumbuzo, iSikhumbuzo ngokwaso, nokubuyela kwabo baye beza, ziza kusinika ithuba lokunceda abantu abanomdla bazi impendulo yalo mbuzo. Baza kuvuyiswa kukwazi indlela uthando nobulumko bukaYehova obubonakaliswe ngayo ngedini lentlawulelo. Zeziphi izinto esinokubafundisa zona ngentlawulelo?
15. UYesu wayahluke njani kuAdam?
15 UYehova wasebenzisa umntu ofezekileyo ukuba abe ngumhlawuleli. Loo mntu kwakufuneka angagungqi kuYehova aze akulungele ukuncamela abantu abangenathemba ubomi bakhe. (Roma 5:17-19) UYehova wathumela izibulo lendalo yakhe ukuba lize emhlabeni. (Yoh. 1:14) UYesu waba ngumntu ofezekileyo kanye njengoAdam. Kodwa ngokwahlukileyo, uYesu wenza ngendlela uYehova awayelindele ukuba umntu ofezekileyo enze ngayo. Naxa wayevavanywa ngokuqatha, uYesu akazange one okanye aphule imithetho kaThixo.
16. Kutheni intlawulelo isisipho esixabisekileyo?
16 Ekubeni uYesu wayefezekile, wayenokubasindisa abantu esonweni nasekufeni ngokuthi abafele. Waba yiyo yonke into uAdam awayemele abe yiyo​—wayengumntu ofezekileyo, engagungqi ekukhonzeni uThixo kwaye emthobela. (1 Tim. 2:6) UYesu waba lidini lentlawulelo elavulela abantu ‘abaninzi’​—amadoda, abafazi nabantwana​—ithuba lokuphila ubomi obungenasiphelo. (Mat. 20:28) Ngokwenene, idini lentlawulelo likaYesu livula indlela yokuba kuzaliseke injongo kaThixo awayenayo kwasekuqaleni. (2 Kor. 1:19, 20) Intlawulelo yenza abantu abathembekileyo babe nethemba lobomi obungunaphakade.
UYEHOVA USIVULELA INDLELA YOKUBUYELA KUYE
17. Intlawulelo isinika ithuba lantoni?
17 UYehova wancama lukhulu ukuze asilungiselele intlawulelo. (1 Pet. 1:19) Ubathanda kakhulu abantu kangangokuba wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuba abafele. (1 Yoh. 4:9, 10) Ngoko singathi, uYesu wathatha indawo katata wethu, uAdam. (1 Kor. 15:45) Ngokwenjenjalo, uYesu akaneli nje ukusinika ubomi, kodwa usinika nethuba lokuba ekugqibeleni sibuyele kwintsapho kaThixo. Ngenxa yedini lentlawulelo likaYesu, uYehova unokusamkela kwintsapho yakhe engakhange ayeke ubulungisa bakhe. Ngaba akuchulumancisi ukucinga ngexesha laxa bonke abo bathembekileyo beya kube befezekile? Intsapho yasemhlabeni iza kube imanyene neyasezulwini. Sonke siza kube singabantwana bakaThixo ngokupheleleyo.​—Roma 8:21.
18. UYehova uza kuba “zizinto zonke kubo bonke” nini?
18 Imvukelo kaSathana ayizange yenze uYehova ayeke ukubathanda abantu kwaye ayisoze ibathintele abantu abangafezekanga ekubeni banamathele kuYehova. Intlawulelo elungiselelwe nguYehova iza kunceda abantwana bakhe babe ngamalungisa ngokupheleleyo. Cinga indlela ubomi obuza kuba yiyo xa “wonk’ ubani ombonayo uNyana aze abonise ukholo” ephila ngonaphakade. (Yoh. 6:40) UYehova uza kusebenzisa uthando nobulumko bakhe ukuze abuyisele abantu ekubeni bafezeke, ngokwenjongo yakhe yasekuqaleni. Uza kuba nguTata, aze “abe zizinto zonke kubo bonke.”​—1 Kor. 15:28.
19. (a) Ngenxa yokuba simbulela uYehova ngentlawulelo, sifanele senze ntoni? (Jonga ibhokisi ethi ‘ Masifuneni Abafanelekayo.’) (b) Yintoni esiza kufunda ngayo kwinqaku elilandelayo?
19 Ngenxa yokuba simbulela uYehova ngentlawulelo sifanele sichazele abantu ukuba nabo banokusifumana esi sipho sixabisekileyo. Bamele bazi ukuba intlawulelo yindlela uYehova asinika ngayo ithemba lobomi obungunaphakade. Sekunjalo, intlawulelo ifeze okungakumbi. Inqaku elilandelayo libonisa indlela idini likaYesu elinceda ngayo ukuba kuphenduleke izityholo ezenziwa nguSathana e-Eden.
ISIMEMO seSikhumbuzo yenye yezona zinto sizisasaza kakhulu. Kunyaka ophelileyo, sapapasha eziyi-440 000 000, ngeelwimi ezingaphezu kweziyi-530. Ngaba usenazo izimemo zeSikhumbuzo salo nyaka osenokuzihambisa? Kwazi bani, mhlawumbi esinye sazo singanceda umntu ofanelekayo abekho eSikhumbuzweni!​—Mat. 10:11.